Tsy Ireo Vondrona Mpikirakira Rongony Intsony No Loza Lehibe Indrindra Mitatao Ho An’ireo Meksikana Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Global Voices Latin America
Voadika ny 15 Aogositra 2015 4:03 GMT
Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogin'ny Fanaovan-gazety tany Amerika ito lahatsoratr'i Mariana Muñoz ito, ary nahazoan-dàlana ny famerenana azy eto.
Tamin'ity taona ity, hatreto aloha, miisa enina ny tranganà famonoana mpanao gazety – samy novonoina tany atsimon'i Meksika daholo izy rehetra ireo. Tato anatin'ny herinandro iray tamin'ny volana Jolay, mpanao gazety telo no novonoina tao Oaxaca, Veracruz sy Guanajuato – samy fanjakana tatsimo daholo ireo.
Toa manamarina io fironana io ireo antontan'isa avy amin'ny Periodistas en Riesgo, vohikala izay manaraka sy mamakafaka/mandrakitra ny momba ireo fanafihana mpanao gazety any Meksika.
Vao haingana i Javier Garza Ramos, avy amin'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenana ho an'ny Mpanao gazety (ICFJ) mpiara-miasa amin'ny Knight International Journalism izay manara-maso ny Periodistas en Riesgo, no nanoratra lahatsoratra ho an'ny El País izay ahitàny ny fikisaky ny herisetra avy any avaratra mankany atsimo.
Nalefa tany amin'ny kaominin'i Almoloya de Juarez, ao amin'ny fanjakàn'i Meksika, i Daniel Blancas, mpitatitra vaovao ho an'i La Cronica, mba hanadihady ny fitsoahana am-ponja an'ilay mpanjakaben'ny rongony any Meksika, Joaquín Guzmán Loera, fantatra amin'ny anarana El Chapo ihany koa. Ny hitafatafa amin'i Calixto Estrada Castillo no tokony ho asany, io no tompon'ny trano farany izay natao teboka niafaran'ny tonelina nandosiran'i Guzmán Loera.
Araka an'i Huellas de Mexico, avy amin'i Jorge Peña ilay fandrahonana, tomponandraiki-panjakana ao amin'ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao Zinacantepec.
Araka ny tatitra voalohany miseho isaky ny enim-bolana ny taona 2015 ataon'ny Article 19, mitondra ny lohateny hoe, “Más violencia, más silencio” (“Herisetra miha mitombo, fahanginana miha mitombo”), herisetra miisa 227 atao amin'ireo mpanao gazety no voaray tamin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2015. Nampian'ilay tatitra hoe, tena ambony be io raha oharina amin'ny salan'isa nandritra ny fitondran'i Felipe Calderón ny taona 2006 hatramin'ny 2012, izay teo amin'ny 182 isan-taona eo ho eo.
Na hoe ny fanjakan'i Guerrero aza no manana ny isa ambony indrindra amin'ireo fanafihana mpanao gazety (38), mbola mitohy ho iray amin'ireo faritra mampidi-doza be indrindra hanaovana asa an-gazety i Veracruz noho ireo isa maronà famonoana izay niseho tao, araka an'i Animal Politico.
Tao amin'ny lahatsoratry ny BBC Mundo, nolazaina ho “afobe ho an'ireo mpanao gazety” io firenena io.
Araka ny Article 19, mpanao gazety miisa valo ambinifolo no novonoina tao hatry ny taona 2000, ka voarakitra ho teo ambanin'ny fitondran'ny governora ankehitriny, Javier Duarte, ny 12 amin'ireo famonoana ireo (14, araka ireo loharano hafa).
Ny taona 2011, noravàna ny polisy kominalin'i Veracruz noho ny fiahiahiana fisiana kolikoly sy ny zava-mitranga hoe nanomboka nanao ny asany indray ny miaramila.
Niforona tao amin'ny firenena ny vondrona ho fiarovan-tena, tofoka amin'ny tsy fahitam-bokany amin'ny asan'ireo polisy,
Nalaina an-keriny tao an-tranony i Sánchez ny 2 Janoary; hita tao Veracruz ny vatana mangatsiakany ny marainan'ny 24 Janoary. Maro ireo mino fa nanome baiko ny fakàna azy an-keriny sy hamono azy ny ben'ny tanàna, Omar Cruz.
Olana ao Meksika ny tsimatimanota, ao amin'ny tany izay zara raha voasazy ny heloka bevava atao amin'ireo mpanao gazety. Any amin'ny laharana faha fito no misy ilay firenena amin'ny Tondro Maneran-tany Momba ny Tsimatimanota, taona 2014 ataon'ny Kaomity Miaro Ireo Mpanao Gazety. Ho fanampin'izany, ireo tsikera dia nanipika ireo olana lehibe eo amin'ny rafi-piarovana federaly ho an'ireo mpanao gazety tandindonin-doza.